Trump: "Waan burburin doonaa Kuuriyada Waqooyi haddii ay nagu qasbaan" - BBC News Somali
Trump: "Waan burburin doonaa Kuuriyada Waqooyi haddii ay nagu qasbaan"
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe in uu burburin doono Kuuriyada Waqooyi haddii lagu qasbo in ay isdifaacaan ama ay difaacaan saaxibada Mareykanka.
Waxa ay ahayd khudbad kulul oo uu ku tilmaamay hogaamiye , Kim Jong-un, "Nin sita gantaal islamarkana ku jira howlgal ismiidaamin ah."
Kuuriyadda waqooyi ayaa tijaabisay Nukliyeerka iyo gantaalo iyada oo ku gacansayrtay qaramada midoobe.
Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo dhoolatus sameeyay
W/Kuuriya oo looga digay tijaabada gantaallada
Nin Kuuriyada Waqooyi u dhashay oo loo hayay dilka Kim oo lasii daayay
Ka hor inta uusan khudbadda jeedin Mr Trump, ayaa waxa hadal jeediyay xoghayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres oo ku baaqay in laga hortago dagaal dhaca.
Image caption Kim Jong-un oo daawanaya tijaabo Gantaal
Madaxweyne Trump waxa kale oo uu weerarey Iiraan iyo waxa uu ugu yeeray hogaankeeda dilaaga ah, waxa uu yiri Iiraan waxay isku deydey in ay deganaansho la'aan ka abuurto Bariga Dhexe oo dhan.
Donald Trump ayaa ugu baaqay Iiran in ay joojiso taageerada ay u fidiso argagixisada islamarkana waxa uu canbaareeyay heshiiskii uu Obama la galay Iiraan.
Dhanka kale Iiran ayaa si cadho leh uga jawaabtay khudbadii Trump ee golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay, wasiirka arrimaha dibedda ee dlakaasi Maxamed Javad Zarif waxaa u hadalka Trump ku tilmaamay hadal nacayb ah oo jaahilnimo ka muuqato, oo aan looga bahnayn Qaramada Midoobay xilligan lagu jiro qarniga 21-naad.
Hase ahaatee waxaa isna arrinkani ka hadlay Madaxweynaha Iiran Xassan Ruuxaani oo sheegay in Maraykanka uu waayi doono kalsoonida ay dunidu ku qabto hadii u ka laabto heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iiran lala gaadhay.
Golaha guud ee qaramada midoobe oo kalfadhiga uu socon doono ilaa Isniinta ayaa ah mid ay isugu imaadaan hogaamiyayaasha 193 dal ee xubnaha ka ah.
1 Maajo 2017
Trump oo cambaareeyay Kuriyada Waqooyi ka dib markii uu dhintay arday
Kuuriyada Waqooyi: 'CIA-daa maleegtay shirqool lagu dilayo Kim Jong-un'
5 Maajo 2017
Maxaa Trump kala gudboon nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi?
4 Sebtembar 2017